मेरा बारेमा यस्तो टिप्पणी गरिनुअघि मैले त्यस्तो सपनै देखेको थिइनँ। म त रेडियोमै मस्त थिएँ।
संसारभर महिलाको उमेरलाई किन सधैँ स्वाभाविक रूपमा लिइँदैन भनेर बहस चल्न थालेको छ। तर, यस्ता बहसले विचार पैदा गर्न सकेको छैन। किनकि महिला स्वयंले उमेरलाई करिअर वा सुन्दरताको गिरावटका रूपमा लिइरहेका छन्। महिलाको उमेरलाई ‘ग्रेसफुल्ली’ किन हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ? किन समाचार वाचन गर्ने महिलाको भविष्यमाथि चिन्ता गरिन्छ तर पुरुषका बारे कुनै चिन्ता हु“दैन ?
विकासका अनेक योजना कोर्दै महिला सशक्तीकरण र उत्थान गर्न हिँडेका अर्थमन्त्री र युद्धमा होमिएको शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउने नेताज्यू त महिलाका बारे यति संकुचित देखिए भने अरूका के कुरा गर्नु !